Baadhitaanka Carruurnimada Hore - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Ogow sida ilmahaagu u korayo, u korayo una baranayo
Maadaama ilmahaagu uu ka qaadanayo talaabadaas socod baradka ilaa xanaanada, waa waqtigii saxda ahaa ee uu kaqeyb qaadan lahaa baaritaanka BILAASH ah ee horumarkooda. Baadhitaanka Carruurnimada Hore waa baaritaan fudud oo ku saabsan sida ilmahaagu u korayo, u korayo una baranayo. Sharciga gobolku wuxuu farayaa in carruurta la baaro inta u dhexeysa 3 ilaa 5 sano jir. Baadhitaanka da'da 3 1/2 ayaa ugu fiican si markaa wixii caafimaad ama horumarin ee welwel leh isla markiiba wax looga qaban karo.
Cunug walba oo aadaya iskuulka gobolka Minnesota waa inuu lahaadaa diiwaanka baaritaanka caruurnimada hore kahor inta uusan gaarin xanaanada. Baaritaanka Carruurnimada Hore ma aha qiimeynta u diyaargarowga xanaanada mana aha in dib loo dhigo illaa isla inta ka horreysa xanaanada. Si kastaba ha noqotee, haddii ilmahaagu shan jir yahay, oo aan u qalmin xanaanada, oo uusan weli soo marin baaritaanka dugsiga xannaanada, wac si aad ballan u sameysato.
Qoysaska ku nool degmada dugsiga dhexdeeda waa inay helaan kaarka wax lagu baaro marka ilmahoodu gaadho 3. Haddii aadan helin ogeysiiska, fadlan naga soo wac 651-351-4022.
Ballan online ama wac 651-351-4022 .
Waxa laga filan karo inta lagu jiro baaritaanka:
Ilmahaagu wuxuu la dhammaystiri doonaa waxqabadyada koritaanka xirfadle tababbaran si uu u arko haddii ay la kulmayaan taariikhiyo muhiim ah oo u gaar ah da'dooda. Waxay eegi doonaan:
Dherer iyo miisaan
Muruqyo waaweyn iyo kuwo yaryar
Fikirka, luqadda iyo xirfadaha wada xiriirka
Haddii arrimo la aqoonsado, waan kula shaqeyn doonnaa si aan u helno taageerada aad u baahan tahay. Ballamadu sida caadiga ah waxay qaadataa saacad.
Foomamka waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso
Kuwani waa 5 foom oo aad u baahan tahay inaad buuxiso si loogu baaro (eeg hoos). Soo degso afarta foom ee hore, ku daabac ama ku buuxi si elektaroonig ah una dir hills@stillwaterschools.org . Su'aalaha Da'da & Marxaladuhu waa isku xiraha su'aalaha aad u baahan tahay inaad ka buuxiso khadka tooska ah.
Foomka Caafimaadka iyo Horumarinta Carruurta
Foomka Ogolaanshaha Baaritaanka Carruurnimada Hore
Isdiiwaangalinta Baaritaanka Carruurnimada Hore
Aragtida iyo Maqalka Su'aalaha
Su'aalo Weyn & Da'da internetka